Izisebenzi zeHwange National Park Zinakanelwa Ukuthi Yizo Ezibulele Indlovu
Izisebenzi zendaweni egcinelwa inyamazana zendle eye Hwange National Park esezilesikhathi zingaholiswa zibikwa kuyizo ezinakanelwa ukuba zibulele indlovu ezedlula amatshumi ayisithupha-62 ngetshefu ye cyanide.
Amaphephandaba akwele Bhilithani abalisa ele, The Dailymail lele The Telegraph abika ukuthi ancwetshwe udlebe ngomunye umuntu ongathandanga ukuvezwa igama ukuthi izisebenzi lezi yizo ezifakele indlovu itshefu njengendlela yokutshengisa ukukhona kwazo kumqatshi osele nyanga ezithize engaziphi iholo lazo.
NgoMvulo kubikwa kulendlovu ezingamatshumi amabili lambili ezibulewe ngokunatha litshefu ye cyanide emangweni weSinamatela khonale eHwange.
Unobhala wogatsha olubona ngezokulondolozwa kwemvelo lezomkhathi umnumzana Prince Mupazviriho, utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi yena akala lwazi ngaloludaba lwezisebenzi ezibulala indlovu njengendlela yokutshengisela ukukhonona kwazo ngenxa yokungaholiswa, ngoba ubengekho elizweni eke wethekelela emazweni.
Esinye isiphathamandla sogatsha lwakhe esingathandanga ukubethwa ngegama ngoba phansi kweziqondiso zikahulumende singavunyelwa ukukhuluma labezindaba, sitshele lumsakazo ukuba kulula ukwethesa lezi zisebenzi umlandu wokubulala indlovu ngoba zife endaweni lapho okumele zivikele lezi nyamazana njalo kungelula ukuthi abazingela okungekho emthethweni bakwenze bona bekhangele bengenzi lutho.
Kodwa umqondisi wenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle eye Zimbabwe Conservation Trust umnumzana Johnny Rodriguez utshele iStudio 7 ukuthi yikucitha isikhathi ukutshona abantu bekhombelana ngomunwe ukuthi uzibani nguye obulele lezi nyamazana, okuqakathekileyo yikulungisisa linkinga ngokuhlawula izisebenzi iholo lazo ukuze zisebenze zingakhononi.